ChaCha oo Daahfurtay Barnaamijka Xiriirka Bulshada | Martech Zone
Arbacada, Maarso 28, 2012 Talaado, Maarso 27, 2012 Douglas Karr
Waxaa jira wax yar oo ah barnaamijyo xiriir la leh oo aan ka tirsanahay laakiin waxaan aad u door bidaa waxa aan ku dhiirrigeliyo bartayada iyo dhinaca bulshada. Waxaa jira jahwareer xiiso leh markay tahay suuq-geynta la-shaqeynta, in kastoo. Inta badan fursadaha gacansaarka ahi waxay ku saleysan yihiin codkaaga ama tirada dadka raacsan ee aad haysato… qasab ma ahan inay ku saleysan tahay saameyntaada iyo awoodda aad ugu beddeleyso rajada macaamiisha.
Nidaamyada isku-dhafan ayaa ku yaal meel kasta laakiin ChaCha ayaa hadda bilaabay wax xayawaan ka duwan Ku-xirnaanshaha ChaCha. Si ka duwan barnaamijyada isku xidhka ah ee dadka ku kaxeeya xayeysiinta xayeysiinta, ChaCha waxay adeegsaneysaa barnaamij xiriiriye ah si dadka loogu kaxeeyo in la xuso waxyaabaha ay ka kooban yihiin bulsho ahaan… ka dib u bixi iyaga oo ku saleysan dhagaystayaasha wax soo mara. Waa xoogaa isku-dhaf ah oo u dhexeeya bulshada iyo lacag-gujinta-guji. Hadafku waa, dabcan, in loo wado taraafikada goobta - taas oo markaa u rogeysa dhagaystayaasha dalal xayeysiin iyo maalgalin ah.
Waxaan iska diiwaangeliyay barnaamijka daqiiqado gudahood waxaanan helay olole waxtar leh oo loo diri karo kuwa raacsan: Sida Aan Loogu Fashilmin Emailka Ganacsi. Anigoo ah blogger iyo nin ku jira baraha bulshada, waxaan had iyo jeer raadiyaa waxyaabo aan la wadaago oo waxtar u leh dhagaystayaashayda. Kani waa maskax-laawe… Waxaan ka helayaa labadaba waxyaabo faa'iido leh iyo Waxaa laygu siiyaa lacag wadaag.
ChaCha runti waxay soo kordhisay xoogaa xariif ah of dhawaanahan… barnaamijyadeeda mobilada iyo Iris, si loo gaaro 2 bilyan oo su'aalood oo laga jawaabayo lana gaaro faa'iido - aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay shaqaalahooda. Way adagyihiin oo had iyo goor bay baqshadda riixaan. Mahadsanid Scott iyo shirkad!
Tags: affiliatebarnaamijka affiliateChachaContent Suuq
Scoutmob: Waqtiyada dhabta ah ee Lacagta Maxaliga ah
Waan hubin doonaa tan. Had iyo jeer raadinaya wax soo saar tayo leh. Mahadsanid. Si diirran, Susan
Douglas waqti fiican oo ku habboon. Dabaysha qabashadan tan oo loo maro G + durdur. Saamiyada bulshadu waxay noqonayaan metrik aad u khuseeya oo la qiimeeyo.
Hadda waxaan ahay gacansaar, runtiina waa barnaamij weyn. Waxaan sameeyay $ 60 saacad markii mid ka mid ah xiriiriyeyaashayda uu caan ku noqday casriyeynta. (Taasi waa dhif iyo naadir).
Haddii aad rabto inaad xiriir la yeelatid OO aad sameyso camalkaaga wanaagsan maalinta, markaa fadlan isticmaal xiriiriyaha gudbinta: http://affiliates.chacha.com/signup/CD10667
Mahadsanid! ChaCha Weligaa!
Waxaan iskudayaa inaan isdiiwaangaliyo, laakiin ChaCha ayaa i siisa qaladka soo socda, in kasta oo aan horey u hubiyay sanduuqa "ku heshii shuruudaha":
"QALAD: Waa inaad calaamadeysaa sanduuqa" Oggolaanshaha Shuruudaha ", ka hor intaadan noqon Shuraako."
Waxaan qiyaasayaa inay taasi noqon karto arrin ku saabsan isweydaarsiga shabakadda, Paula. Browser noocee ah ayaaad isticmaaleysaa tanna waxaan ugu gudbin doonaa kooxda halkaas joogta.